विप्लवको चेतावनीपछि एमसीसीबारे अमरिकाले दियो १० बुँदे प्रष्टिकरण, नेपालमा सेना राख्ने केछ योजना ? — Sanchar Kendra
विप्लवको चेतावनीपछि एमसीसीबारे अमरिकाले दियो १० बुँदे प्रष्टिकरण, नेपालमा सेना राख्ने केछ योजना ?
काठमाडौँ । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सदनबाट एमसीसी पास नगर्न चेतावनी दिएको २ दिन नबित्दै अमिकाले मुख खोलेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको धारणा बाहिरिएसँगै यता जनस्तरमै पनि एमसीसीको पक्षविपक्षमा व्यापक तर्क उठे । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित अमरिकी दूतावासले शुक्रबार दसबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको हो ।अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको जनाएको छ ।